RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : NY FRANTSAY NO TOMPONANDRAIKITRA AMIN’NY KRIZY – MyDago.com aime Madagascar
RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : NY FRANTSAY NO TOMPONANDRAIKITRA AMIN’NY KRIZY
Mazava tahaka ny tafika andrefan-tànana ny raharaham-pirenena hoy ny Cst Rakotoamboa Jean Louis androany teny amin’ny Magro Behoririka, ary porofo mivantana fa tomponandraikitra amin’ny krizy ny frantsay. Na sosialisita na liberaly no eo amin’ny fitondrany hoy izy dia miaro ny tomboantsoa iray ihany izy ireo. Inona no hidirany Goldblatt amin’izany hoe aorian’ny fifidianana vao miditra eto ny filoha Ravalomanana Marc, tsy azy akory I Madagasikara. Ny tafika frantsay hoy izy amin’izao fotoana izoa manofana ny miaramila gasy hanao sarin’ady. Raha maharesy izany ny filoha Ravalomanana Marc hoy ity olomboantendry ity dia hokorontaninareo. Raha sanatria ka resy isika asiana korontana eto dia mitohy ny tetezamita. Momba ny fifidianana dia nambarany fa nt tontolon’ny lalàna rehetra momba izany dia mitanila anisan’ny ohatra amin’izany hoy izy ny volavolan-dalàna tao amin’ny Cst izay tsangatanana no nandaniana azy ka tsy nandeha amin’ny laoniny izany. Ny Ffm ihany koa hoy Rakotoamboa raha jerena ny ao anatiny dia ny finoana any Rajoelina kanefa ireo no hifantina ny olona omena ny aminsitia. Koa inona hoy izy no zavabanona amin’izany. Ny Ni..Ni… kosa dia ny frantsay no ao ambadika satria efa tamin’ny andron’ny Sylla no saika hanoloana an-dRajoelina. Ankehitriny ihany koa dia mbola izy no lehiben’ny tafika, ny sefo de region, ny ben’ny Tanana sasany, dia olony avokoa, ka noho izany tsy hisy fifidianana vanona eto. Ambonin’izay hoy ity mpanao politika ity dia ny sesi-tany politika any ivelany tsy mbola tafaverina, ny haino amanjery tsy mbola nosokafana nefa efa telo volana alohan’ny fifidianana isika izao. Io indray hoy Rakotoamboa ny ministeran’ny ati-tany fa manery ny antoko Tim. Ao amin’ny tondrozotra anefa mazava ny voalaza ao amin’ny andininy faha 12 fa tsy maintsy dinihana ny lalànan’ny antoko mpanohitra. Rehefa jerena amin’ny fo tsy miangatra hoy izy dia tsy hita izay liana an-dRajoelina raha hanao fifidianana. Ireo lehiben’ny tafika ihany koa dia mila miala eo.
Auteur Solo Razafy*Publié le 31 janvier 2013 Catégories Politique
3 pensées sur “RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : NY FRANTSAY NO TOMPONANDRAIKITRA AMIN’NY KRIZY”
mety marina ny zavatra lazainao atoa rakotoamboa O!
TSY AMPY INTSONY NY FITANISANA NY FAHOMBIAZN I RAJOELINA SY NY FRANTSAY @ FITANANA NY TETEZAMITA ,ary lazaiko fa hita @ gazety frantays sasany fa na folo taona aza dia ho voatanan iRajoelina io tetezamita io.
KA RAKOTOAMBOA O !AOKA IZAY NY RESABE EFA FANTATRA DAHOLO IZANY .
ARY NY MIALA AO SYSTME AINGANA ARY MANETSIKA NY VAHOAKA HO ENY ANDALAMBE @ IZAY .IZAO .
Mbola variana amin’ny zavatra hafa ny tompon’andraikitra frantsay vaovao. Ary eo ireo izay tena tsy naharaka ny tena fandehan’ny raharaha fa dia nofahanan’ny sasany lalitra fotsiny.
Efa natao tsara tatitra ny tena marina, ary dia ho hita eo ny tohiny.
Efa nolazaina fa fomba fiadin’ny firenena rehetra ny mitady an’izay mahasoa azy. Ny tena tompon’andraikitra amin’izao krizy izao dia tsy iza fa ny vahoaka malagasy irery ihany !
Izao ve dia tokony ho ekena, ary maninona no tsy mba nasiana fanazavàna mba ho fantatry ny rehetra ny tetika maizina ao ambadik’itony Ordonnance fôpla itony ?
Sa ianareo manaiky koa ?
1 février 2013 à 6 h 00 min
AVELAO KOSA ALOHA MBA HITANISA IZAY TIANY RIZAREO SATRIA NY OLONA SASANY TSY MAHALALA – IANAO RAVELONARIVO EFA MAHALALA NY REHETRA NA IZAHO KOA AZA FA INDRAINDRAY ADINO – KA INONA NO MAHARATSY NY MBOLA HILAZANY AZY E !
MAFY LOATRA NY FIAINANA KA NA AMANARIVONY AZA NY HAMARENANA AN’IZANY RE TOMPOKO – ALEO ATAO FOANA SATRIA FANTANTSIKA TSARA FA NY FAT MITENITENY FOANA ARY NY EO IHANY NO MIVERINA KOA ALEO MBA HO HITA EO FOANA NY FANAON’NY FRANTSAY SY RAJOELINA
IZAY NO MBA HEVITRO
Précédent Article précédent : RAVELOSON CONSTANT : SAHIA ISIKA MILAZA FA TSY METY AMINTSIKA NY TSIKOMBAKOMBAN’NY MPANONGAM PANJAKANA
Suivant Article suivant : RAVELONANOSY MAMITIANA : TSY ILAINA INTSONY SIMAO FA TSY MAHAVAHA OLANA